उपकुलपती भण्डारी रास्ट्रपतिबाट ‘वुमन इन मेडिसिन इन नेपाल’ अवार्डद्वारा सम्मानित - जागरण अनलाइन
दाङ । नेपाली चिकित्सा क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान गरेको भन्दै बरिष्ठ महिला डाक्टर राप्ती स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानकि उपकुलपती प्राडा संगीता भण्डारी सम्मानित हुनु भएको छ ।
आज शुक्रवार रास्ट्रपति निबास शितलनिबासमा एक कार्यक्रमका बिच रास्ट्रपति बिद्यादेबि भण्डारीबाट उपकुलपती भण्डारी सम्मानित हुनु भएको हो ।
उपकुलपती भण्डारीसहित १५ महिला चिकित्सकलाई सम्मान गरिएको हो । रास्ट्रपतिमार्फत नेपाल चिकित्सक संघले उपकुलपती भण्डारीसहित १५ जना वरिष्ठ महिला चिकित्सकलाई ‘वुमन इन मेडिसिन इन नेपाल २०२१’ अवार्ड प्रदान गरेर सम्मान गरेको हो ।
Women in Medicine in Nepal 2021 अवार्ड चिकित्सा सेवामा कार्यरत रही उत्कृष्ट सेवा गर्ने महिला चिकित्सकलाई प्रदान गरिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपुर्ण भुमिका निर्बाह गरेको भन्दै उहाँ सम्मानित हुनु भएको हो ।
प्रतिष्ठानकी निर्देशक डा. प्रज्ञा सिंह बस्नेतले यस प्रतिष्ठानको उपकुलपतिलाई अवार्डबाट सम्मानित हुने कार्यले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सम्पूर्ण चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरु गौरवान्वित भएको महशुस हुने बताउदै यसबाट सम्पूर्ण प्रतिष्ठान परिवारको हौसला बढेको बताउनु भयो ।
कोरोना कहर सुरु भएयता समुदाय र प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकीय पक्षमा पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्दै चिकित्सक संघद्वारा भण्डारीलाइ सम्मान गरिएको हो।
नेपाललगायत विश्वलाई कोभिड–१९ ले भयावह अवस्थामा पुर्‍याएका बेला उपचारका क्रममा पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्दै संघले दाङको राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. भण्डारिलाई विशिष्ठ सम्मान गरेको जनाएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङमा स्थापना भएको प्रतिष्ठानमा सीमित साधन र स्रोतबीच डा. भण्डारीले विशिष्ठ योगदान पुर्‍याउनु भएको थियो।
‘भयावह र त्रासबीच अगाडि बढेको अवस्थामा आफ्नो संस्थामा सीमित स्वास्थ्यकर्मीका साथै अन्य स्रोतको उत्तम व्यवस्थापन गरी कोरोनाका बिरामीलाई प्रत्यक्ष उपचारका साथै रोगथामका लागि नमुनायोग्य काम गरेकोमा सो सम्मन प्रदान गरिएको छ’, प्रदान गरिएको सम्मान पत्रमा उल्लेख छ। उहाले गरेको योगदान सबैका लागि उदाहरणीयसमेत भएको सम्मान पत्रमा बताइएको छ।
चिकित्सक संघले रास्ट्रपतिबाट गरेको सम्मानपछि भण्डारीले आफुमा काम गर्न थप हौसला मिलेको बताउनु भयो । सम्मानित भएपछि उहाले थप काम गर्ने हौसला मिल्नुका साथै आफ्नो पेसा र जिम्मेवारीप्रति दत्तचित्त भएर लाग्न थप प्रेरणा मिलेको बताउनु भयो ।